U Tun Hla၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
U Tun Hla's Apps
U Tun Hla's Likes
U Tun Hla's Groups
U Tun Hla's Discussions
Started this discussion. Last reply by ဇင်ငြိမ်း Nov 4, 2013. 1 Reply0Likes
ကောသလမင်းအိမ်မက်(၁၆)ချက်ထဲက တစ်ချက်ကိုသတိရမိတယ်၊ ရေကန်ထဲကရေဟာ ပုံမှန်ဆိုရေလယ်ကကြည်ပြီး လှိုင်းဂယက်ကြောင့် ရေစပ်ကနောက်ရမှာပါ ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် ရေလယ်ကနောက်ပြီး ရေစပ်ကကြည်နေတယ်၊…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
U Tun Hla သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
U Tun Hla၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
U Tun Hla's ၏ဓါတ်ပုံများ
U Tun Hla's Blog
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 9, 2014 တွင်4:06pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments5Likes
၁။ နိဗ္ဗာန်သည် ကံ၏အကျိုးမဟုတ်၊ဉာဏ်၏ အကျိုးဖြစ်တယ်။
၂။ အသေမဦးမီ ဉာဏ်ဦးမှ တော်တော့မည်။
၃။ ဉာဏ်ဦးစီးပြီး ဝိပဿနာ တရားအားထုတ်ပါ။
၄။ ခန္ဓာ၏ ဝတ္တရားက အသေရှာတာ၊ဉာဏ်၏ ဝတ္တရားက
၅။ ကံစီမံတာ လူ့ဘုံ၊နတ်ဘုံ၊ဗြဟ္မာ့ဘုံ ၊ ဉာဏ်စီမံတာ နိဗ္ဗာန်။
၆။ အသက်ကြီးလေလေ ကံမွဲ ၊ ဉာဏ်မွဲလေလေမှတ်။
၇။ ကံမွဲတာက အရေးမကြီး၊ဉာဏ်မွဲလျှင် နိဗ္ဗာန်မရနိုင်၊သေခါနီး
တွေက သေခါဝေးတွေအတွက် ပူတောင့် ပူပင်ဖြစ်မနေကြနဲ့။
၈။ နားကြီးကြီးနဲ့ တရားနာပါ၊နားကတရားနာ ဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်။
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2014 တွင်10:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာမြတ်သုံးပါးအားရှိခိုးပူဇော်ကတော့ပါ၏ ။ဘုရားရှိခိုးပြီးပြီဆိုတော့ပြောချင်တာလေးတွေပြောရအုံးမယ် လူတွေကပြောကြလိုက်ထာ ငါတို့လူ့ဘ၀ဆိုတာကိုကံကောင်းလို့ရတာ ဒါတဲ့ထပ်ပြီးကံကောင်းတာကသာသနာနဲ့လည်းကြုံရတယ်ပေါ့လေ မှန်ပါတယ် လူဘ၀ရဘို့ဆိုတာဘယ်လောက်ခက်ခဲကြောင်း ရှင်တော်ဘုရားကဥပမာဥပမေယျတွေနဲ့ဟောပြလိုက်ထာ အားလုံးသိကြပါတယ် ဒီလိုပဲသာသနာနဲ့တွေ့ဆုံဘို့ဆိုတာလည်းပို၍တောင်ခက်ပါသေးတယ် ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကကျော်လွှားပြီးအခုလူ့ဘ၀ကိုရပြီ သာသနာနဲ့လည်းကြုံပြီ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတာဒီနေရာကစမယ် ဟုတ်ပြီ…
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2014 တွင်10:04pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူဖို့ စိတ်ထဲကနေကြံ၊ဆုတောင်းတာ ၉သင်္ချေ၊ နှုတ်ကနေ ထွက်ပြီး ဆုတောင်းတာက ၇ သင်္ချေ ၊ ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဆီမှာ ဗျာဒိတ်ရပြီး နောက် ပါရမီ ဆယ်ပါး ပြား သုံးဆယ်ကို ဖြည့်ရတာ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်ရှည်လျှားလွန်းလှတဲ့ ကာလကို ပါရမီတွေဖြည့်ပြီး ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ရှိတော်မူတဲ့အ ခါ ၄၅ ၀ါ ကာလပတ်လုံး မနားမနေ သတ္တ၀ါတွေကို တရားရေအေး တိုက်ကျွေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားပွင့်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်လောကလုံးက အတ္တ ၊ မြတ်စွာဘုရားကတော့ အနတ္တ ဆိုပြီး တစ်လောကလုံးနဲ့…
ကျေးဇူးရှင် ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူလေ့ရှိသော တရားအနှစ်သာရများ...
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2014 တွင်9:59pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
သီလဆောက်တည်ပြီးရင် ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကြ။ ဖြည့်လို့ ပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် မိမိစိတ်အလို တောင့်တတဲ့အတိုင်း ပြီးမယ်၊ ယခုလဲ ချမ်းသာမယ်၊ နောင်လဲ ချမ်းသာမယ်။
ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာ၊ သံသရာချမ်းသာ ၂−ဖြာကို ပေးစွမ်းနိုင်တာဟာ ဘုရားရှင့် အဆုံးအမတော်ကလွဲလို့ တခြားမရှိဘူး။
ဘုရားရှင် အဆုံးအမဆိုတာ ပိဋက ၃−ပုံဘဲ။ ပိဋက ၃−ပုံ ဆိုတာ အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်။ ပိဋက သုံးပုံကို အဆီထုတ်ပါလျှင် “ဗောဓိပက္ခိယတရား ၃၇−ပါး” ရတယ်။ ဗေဓိပက္ခိယ တရား ၃၇−ပါးကို အဆီထုတ်လျှင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးရတယ်။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို အဆီထုတ်လျှင်…
9:07pm အချိန်မေ 30, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:19pm အချိန်အောက်တိုဘာ 18, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လေးစားအပ်ပါသော ဓမ္မအဆွေတော် ဦးထွန်းလှ ခင်ဗျာ...။ မိတ်ဆွေတင်သွင်းသည့် ရေကမ်းစပ်များ ကြည်လေရော့မလား..ဘလော့သည်။ ဘလော့တင်ရန် ဆိုသည့် နေရာ၌ တင်ခြင်းထက် ဓမ္မဆွေးနွေးဝိုင်း ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ဆွေးနွေချက်တင်ရန် ဆိုသည့် နေရာ၌ တင်ခြင်းက ပို၍သင့်တော်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ သို့ပါ၍ ဆွေးနွေးချက်တင်ရန် နေရာ၌ ပြောင်းလဲ တင်ပေးပါရန် အသိပေးပြန်ကြားအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့်...
9:20pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 27, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အခုတော့ စာမေးပွဲနီးလာလို့ ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းကိစ္စ-ကို တစ်လခွဲလောက် ရပ်နားထားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်.။ တကယ်လို့ ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့အခါကြရင် အကျိုးရှိတာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ရေးသွားမှာပါ..။ ရေးစရာ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ လူတွေချက်ခြင်း ခူးခပ်စားနိုင်လောက်တဲ့ အဆင့်မျိုးဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပဲ တင်ပြပေးသွားမှာပါ....
2:28pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 26, 2012, တွင် + မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:47pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 16, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်လဲး နူတ်ဆက်ပါတယ်...သိတာလေးတွေ ဆွေးနွေးကြမယ်နော်
12:03pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 15, 2012, တွင် ko naing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အခုလို တစ်ကူးတက လာရောက် မေတ္တာပို့သတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ.....
ဦးထွန်းလှလည်း...နိဗ္ဗာန်မရောက်မှီ ဘဝသံသရာခရီးတွင် သာယာအေးချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျာ..
....ဘုရားနားမငြီးအောင်...ကောင်းမှု့နဲ့ တောင်းဆုတော့ သဟဇာတ ဖြစ်ရမှာပေါ့...
6:18pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 12, 2012, တွင် mimi thein aung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:14pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 9, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။